Ii-FAQs-Jiangsu Jinluo New Material Technology Co., Ltd.
Ewe, sifuna zonke ii-odolo zamazwe ngamazwe ukuba zibe ne-odolo encinci eqhubekayo, i-MOQ yi-1000 yeemitha.
Kwiisampuli, ixesha lokukhokela limalunga neentsuku ezi-7.Ukuveliswa kobuninzi, ixesha lokukhokela lichongwa ngokobuninzi kunye neenkcukachayeemveliso ezithile.Amaxesha okukhokela ayasebenza xa sifumene idiphozithi yakho,.Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho.Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenjenjalo.
30% idiphozithi kwangaphambili, 70% ibhalansiihlawulwe phambi kokuthunyelwa.
Siqinisekisa izixhobo zethu kunye nokusebenza.Ukuzinikela kwethu kukukwenza waneliseke ngeemveliso zethu, kwaye ixesha lethu lewaranti ngunyaka omnye.
Ewe, sihlala sisebenzisa ukupakishwa kokuthumela ngaphandle okukumgangatho ophezulu.Ukupakishwa okukhethekileyo kunye neemfuno zokupakisha ezingezizo ezisemgangathweni zingafaka iindleko ezongezelelweyo.